Yemagariro Midhiya Kubudirira Summit 2011 | Martech Zone
Ichangoburwa pazvitsitsinho zvemusangano unoshamisa wakabudirira weblogging, Social Media Examiner iri kuvhura iyo Social Media Kubudirira Summit! Uri kushandisa pasocial media saiti senge Facebook neTwitter, asi usiri kuwana mhedzisiro iwe yawaitarisira? Unogona here kushandisa imwe nhungamiro uye mazano matsva?
Ehe, chivimbiso chemagariro enhau chakasimba: Kutaurirana kwakananga nevatengi uye tarisiro vaimbove vasingasvikike. Izvi zvinoreva kuratidzwa kukuru, yakawedzera traffic uye mumwe mukana webhizinesi-zvese pasina vanobatana nevanodhura.
Uye kupihwa hupfumi uhu, ndiani asingade rimwe bhizinesi?
Asi kana iwe wakaita seni, urikutsvaga kusarudza ako enhau midhiya zviitiko zvine hungwaru, pasina kudyiwa neese sarudzo Iwe unongoda kuziva izvo zvinonyanya kushanda. Social Media Muongorori anofara kuzivisa Social Media Success Summit 2011-chiitiko chepamhepo chakagadzirirwa kubatsira vashambadziri uye varidzi vemabhizinesi kuti vakurumidze kubudirira pasocial media.
Makumi maviri nemaviri evanoremekedzwa vezvemagariro venhau vakaungana pamwechete kuti vape mazano avo matsva (ona iyo huru mutsara-kumusoro kurudyi). Ivo vachaburitsa kwese kwazvino matekinoroji uye akaoneswa bhizinesi-ekuvaka matekiniki aunoda kuziva kuti ubatsirwe pakarepo kubva pasocial media.
Kana iwe (sevakawanda kudaro) ukazviwana wavhiringidzika neeseya enhau enhau, ikozvino ndiwo mukana wako wekuisa pasi matraki ekubudirira kwenhau.
ichi zvakazara paIndaneti musangano unotanga Chipiri, Chivabvu 3, uye unomhanya kusvika Chivabvu 26. Iyo inonyatsopararira kwemasvondo mana (uye yakanyorerwa kutamba kwekupedzisira) kuti uwane purogiramu yako. Iko hakuna kufamba! Iwe unongopinda kubva kunyaradzo yeimba yako kana hofisi.
Funga izvi: 96% yevakapinda musangano wedu wekupedzisira weSocial Media Achibudirira vakati vangakurudzira musangano uyu kushamwari uye attend zvakare (ona zvavo zvipupuriro pazasi). Gore rino tine zvese-zvitsva slate yemasimba ekuvandudza masisitimu evatengesi chete.
Iva nechokwadi kuti chengetedza nzvimbo yako mumusangano mukurusa wepamhepo wepamhepo wevashambadzi vari kutsvaga kugona vezvenhau.
Heino kune yakajeka ramangwana pamwe chete!
PS Muchiitiko chekuti iwe uri kushamisika, kushambadzira midhiya yenhau kunosanganisira kubatanidza vanhu kuburikidza nepamhepo pasocial network kuti vabudise pachena, kuwedzera traffic, kuvandudza kutsvagisa masosi, kukudziridza hukama hwevatengi, kuvaka vakasimba vemakambani vanotsigira, kugadzira mhando yemhando uye kukura kutengesa.
PPS Ndinogona here kuva bofu? Zvidzidzo zvinoratidza kuti vatengi vanosarudza kushanda nemabhizinesi ane hukama hwakasimba munhau. Izvo hazvina kunonoka kuti bhizinesi rako riite nevatengi uye tarisiro kuburikidza nesocial media. Asi kana iwe ukamirira, iwe unenge uchipa vakwikwidzi mukana wakakosha uyo uchave wakaoma kukunda.
PPPS Iwe haufanire kuita izvi wega. Kana iwe uchida pfungwa yekujoinha nharaunda inogamuchira yevezera-rakafanana nevezera rako (yedu yekupedzisira Social Media Kubudirira Summit yatengeswa nevanhu 2500 varipo) vanozogovana zvavakaona nehungwaru paunenge uchifamba pamwe chete mumugwagwa uno, ramba uchiverenga…
PPPPS Itai zvino uye ponesa 50%! Dzvanya kunyoresa.
Uri Kutumira Email Kwaani?